Posted by မြရွက်ဝေ at 10:38 PM
ဆရာမုန်း အတန်း လာတက်ပါတယ်
ငတက်ပြား သတ္တိကတော့ အံ့မခန်းပဲ။ ကလေးတွေက ရိုက်လွန်းလို့ ထုံကုန်တာလားလို့ ထင်ရအောင် ရေးထားတဲ့ ဇာတ်ကောင်တွေက ပီပြင်တယ်နော်.. နောက်ပြီး မ တစ်ရာ သားတွေကို ထိန်းကျောင်းနေရတာ အတော်လေး ခက်တယ်ဆိုတာ ဒီစာအုပ်ဖတ်ရင်း သဘောပေါက်လာတယ်... ကိုယ်သာဆို စိတ်ညစ်လို့ ထွက်ပြေးမိမယ်ထင်တယ်... အဟိ..
ဤပို့စ်အား ရိုက်ပေးသောသူ့အား ကျေးဇူးတင်ပါသည်။” တဲ့.. ဟွန်း မမမေမေ မျက်နှာလိုက်တယ်.. :D :D
ဒီပို့စ်လေးဖတ်ရတာ အတွေးလေးတွေ ခေါင်းထဲမှာ ပြေးသွားသလို ရယ်လည်းရယ်မိတယ်.
စာရိုက်ပေးတဲ့ သူ့ကိုလည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ်လို့..
ဆီဘောက်စ် ထားဖို့ စိတ်ကူးမရှိသေးဘူးလားဗျာ. မေးကြည့်တာပါ.